2mm dhagaxa gemstone dabiiciga ah ee buluuga ah ee dabiiciga ah samaynta dahabka
Raadinta gundhigyada ugu wanaagsan, iyo guluusyada ugu quruxda badan. JC Crystal waxay ku faantaa inay soo bandhigaan guluubka dhagaxa ee dabiiciga ah, oo lagu iibiyo qiimaha ugu tartan badan iyo tayada la hubo. Waxaan sidnaa noocyada kala duwan ee ugu wanaagsan ee internetka, oo ay ku jiraan amethyst Stone, lapis lazuli, turquoise buluug, dhagaxa boqortooyada, amber resin, agate, dhammaantoodna waa kuwo la yaab leh oo laga sameeyay macdanaha ugu quruxda badan ee qorraxda hoostiisa ku jira. Waxaa lagu heli karaa tiro balaaran oo cabbiraado iyo tiro ah.
Raadinta gundhigyada ugu wanaagsan, iyo guluusyada ugu quruxda badan. JC Crystal waxay ku faantaa inay soo bandhigaan guluubka dhagaxa ee dabiiciga ah, oo lagu iibiyo qiimaha ugu tartan badan iyo tayada la hubo. Waxaan sidnaa noocyada kala duwan ee ugu wanaagsan ee internetka, oo ay ku jiraan amethyst Stone, lapis lazuli, turquoise buluug, dhagaxa boqortooyada, amber resin, agate, dhammaantoodna waa kuwo la yaab leh oo laga sameeyay macdanaha ugu quruxda badan ee qorraxda hoostiisa ku jira. Waxaa lagu heli karaa tiro balaaran oo cabbiraado iyo tiro ah, kuwanu waa kuumacadaha la awoodi karo oo internetka ah oo aad raadineysay.
Agate waa nooc ka mid ah loo yaqaan 'chalcedony', oo ah dhagax lagu sameeyay kuleyl aad u kulul, oo ku yimaadda midabbo iyo qaabab badan. Magacyada noocyada kala duwan ee gulukoolaha agate waa kuwo muuqaal ahaan u sharraxaya: isha tiger, agate dabka, mows agate, agate geedo, agate malab iyo kuwo kale oo badan.
Guluubka dhagaxa ah ee dabiiciga ah waxay leeyihiin qaabab iyo qaabab kala duwan, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha dahabka. Sida dugaagadaha, biinanka, hilqadaha, iyo waxyaabaha kale ee lagu qurxiyo dharka.
Waxyaabaha Laydhka Dabacsan Dhagax
Magaca Astaanta CJ Crystal
Midabka gadhka tixraac kaarka midabka
Magaca Beads Stone Stone Dabiiciga ah ee Caanka Ah ee Loogu Tala Galay Qurxinta
Erayo-fure kuul dhagaxa dhagaxa ah
Tayada Dheeman dheeman
Waqtiga dirida Ku dhawaad ​​3-7 maalmood
Qaabka mushaar-bixinta TT, Western Union, PayPal, koontada doolarka
Midab Fadlan tixraac kaarka midabka
Dekadda: Dekadda Ningbo & Dekadda Shanghai
Beads Stone Stone Dabiiciga ah ee Caanka Ah ee Loogu Tala Galay Qurxinta
* Tayada ugufiican iyo kormeerka tayada tayada xadidan
* Saamiyo badan iyo in kabadan 130 midab oo kala duwan
* Gaarsiinta adeegga dhakhsaha iyo iibinta ka dib
Alaabo tayo sare leh + Techiques heer sare ah
Rondelle, bicone, biocne dheer, wareeg, kubada cagta, biyo dhaamin, teardrop, maroojin, alwaax, labajibbaaran, geedka canabka ah, geedka beedka, galka berta, iwm.
1, Xidhmadeena: Xirmooyin xirfad-yaqaan leh oo ku duuban xumbada
2.Custom Xidhmida: Ku dari kara sumadda, sawirro iwm dhammaan ahaan codsiaga
Muunad: 2 maalmood gudahood. Soosaarka: 5-15 maalmood
10 Istaandhaaf sambal amar, 100 xargood oo wax soo saar ballaaran ah
1, Saaxiibtinimo wanaagsan (Nickel Free, Lead Free)
2, Iyada oo in ka badan 10 sano ah waayo-aragnimo hodan ah, sameyso gogol dhammaystiran oo dhagax ah.
3, Qiimo jaban oo leh adeeg wanaagsan
4, Waad u habayn kartaa xirxirashada
5, Bixinta Degdegga ah iyo inka badan 130 midab oo kala duwan
1, .Taarista Ballan Qaadka, Alibaba On Line Line.
2, L / C; T / T (Wareejinta Bangiga, Wareejinta Wire)
3, PayPal, Western Union, lacag gram
Shuruudaha Bixinta: EXW, FOB Shanghai / Ningbo; CIF, CNF, iwm
Ganacsadeyaal iibiya dahab, iibin, qurxiyo iibiyaal, shirkad dharka lagu labisto, Sooriyaha dharka sameeya, Hadiyado iwm.
Tayada waa nafteenna, abuurista macaamil macaamiisha
1, U dir Courier Express albaabo albaab - keenis deg deg ah (3-7 maalmood shaqo) waxaana kuu heli karnaa qiimo gaar ah (Talo soo jeedin)
2, Dirasho Hawada: Ku deg deg garoonka diyaaradaha ee degdega ah markaa u baahan inaad adigu soo qaado
3, Ship by badda: Qiimaha dhoofinta oo hooseeya iyo keenis gaabis ah (20-35 maalmood ayaa ku xiran). Habboon oo ku habboon tiro badan iyo keenis aan degdeg ahayn.
Hore: Warshadda Jingcan jumlo jumlo ah oo tolo dhagxaan, ku tolo dhagaxyada rhinestones
Xiga: Dhagaxyo k9 teardrop rhinestones dhagaxa dhagxaanta ah, tayo sare leh dhammaan noocyada kala duwan ee dib u soo celinta dhalada dahabka ah ee alaabta iibka kulul kulul 3 iibsadayaasha
Dhabarka dabiiciga ah ee Lava
Beads Dayax gacmeedyada dabiiciga ah
Jilaacadaha Dabiiciga ee Dhagaxa Dhabta ah
Beads Dhagaxa dabiiciga ah ee Bulk